14 oktobra 1958: 60 taona ny Repoblikan’i Madagasikara | NewsMada
14 oktobra 1958: 60 taona ny Repoblikan’i Madagasikara
14 oktobra 1958, 60 taona izay no nanambarana ny fijoroan’ny Repoblikan’i Madagasikara teny amin’ny efitrano filanonan’ny lycée Galliéni, Andohalo. Firenena repoblikanina i Madagasikara, nanomboka teo: tsy ifandovana ny fitondrana, olom-boafidy ny mpitondra. Noho izany, foana ny 15 oktobra 1958 ny lalàna nahazanatany frantsay an’i Madagasikara, nanomboka ny 6 aogositra 1896 noho izy resy tamin’ny ady, septambra 1895.
Nanamarika ny fijoroan’ny Repoblika àry ny firedonana voalohany ny hiram-pirenena “Ry tanindrazanay malala ô”, solon’ny hira hoe “Arovy ny mpanjaka”, izay talohan’ny 1895. Natsangana voalohany koa ny saim-pirenena malagasy. Napetraka ny teny filamatry ny Repoblika I: Fahafahana-Tanindrazana-Fandrosoana. Niova nanaraka fiovan’ny Repoblika izay teny filamatra izay.
Repoblika fa tsy mbola nahaleo tena
Na firenena repoblikanina aza i Madagasikara ary foana ny lalàna nahazanatany azy, tsy mbola nahaleo tena izy. Mbola tao anatin’ny hoe “lalàna lasitra” i Madagasikara. Fanomanana sy fiomanana ho amin’ny fizakana ny fahaleovantena ny governemanta najoro tao anatin’ny lalàna lasitra. Lasa filohan’ny Repoblika ny filoha lefitra tamin’izany, i Tsiranana Philbert. Nisahana ny andraikitry ny filoha ny Kaomisera ambonin’ny Repoblika, i André Soucadaux.
Nifampiraharahana ny Fahaleovantena
Taorian’ny 14 oktobra 1958 nijoroan’ny Repoblika, tsy nitsahatra nifampiraharaha hahazoana ny Fahaleovantenan’i Madagasikara ny filoha Tsiranana Philibert. Voafidin’ny kongresy roa tonta ho filohan’ny Repoblika I izy, ny 1 mey 1959, ary nitarika ny delegasiona nifampiraharaha momba ny famindram-pahefana, tany Paris, Frantsa, ny 10 febroary 1960. Vita rangopohy ny 2 avrily izany, ary natao sonia teny Andafiavaratra, ny 26 jona 1960.
Io andro io ihany, nambara teny amin’ny vatomasina, Mahamasina, ny fahazoana na ny fiverenan’i Fahaleovantenan’i Madagasikara.
Aiza ho aiza na hatraiza marina izay fanajana sy fanomezan-kasina ny hoe Repoblika izay amin’izao fotoana izao na ny sata repoblikanina? Mbola mampisavoritaka, ohatra, ny tsy fanajan-dalàna afitsoky ny mpitondra, ny tsy fisaraham-pahefana…